भारतीय पीडा खेप्दै सीमाबासी महिलाहरु | BIVAS
← त्रिशुली – गोरखा : मार्गचित्रमा मध्य हिमाली पदयात्रा
उपराष्ट्रपतिका नयां काम र जिम्मेवारी →
भारतीय पीडा खेप्दै सीमाबासी महिलाहरु
बिहानको मिर्मिरे उज्यालो हुदै थियो । गाउका मुलीमान्छे उठे पनि त्यस गाउका सबै मानिस उठिसकेका थिएनन्, गाउ शान्त थियो ।
राजपुर गाविस पतौली नाकाकी ३८ वर्षिय जुजमाया घर्ती भने बिहान सबेरै उठेर आफ्ना कुखुरालाई चारो खुवाउदै थिइन् । त्यही बखत ४/५ जनाको संख्यामा भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एस.एस.बी.) का सुरक्षाकर्मीहरू उनको आगनमा प्रवेश गरे । ती सुरक्षाकर्मीले उनीहरूले नै तोकेको मुल्यमा भाले बेच्नका लागि जुजमायालाई कर गरे । तर, उनले भने कुखुरा सानो भएकाले नबेच्ने बताएपछि एस.एस.बी.का सुरक्षाकर्मीले अभद्र व्यवहार सुरु गर्‍यो ।
‘मैले भाले बेच्दैन भनेपछि एस.एस.बी. को सुरक्षाकर्मीले मेरो हात तान्यो’ जुजमायाले भनिन्,-‘ए कुत्ति तैले भाले दिदैनस् भाले नदिएमा बोडरक्रस गरेर लग्छौं भनेर धम्की दियो ।’ ती सुरक्षाकर्मीले बोडरक्रस गर्ने धम्की दिएपछि जुजमाया बाहिर निस्केको जस्तो गरि त्यही बिहान आफ्ना घरमा सुतिरहेका स-साना भन्टाङ-भुन्टुङ र जायजेथा सबै छाडेर बस्ने बास खोज्नका लागि राजपुर गाविसको मार्रीखोलामा रहेको ससुराको घरमा हानिइन् ।
राजपुर गाविसको पटौली नाकाकी जुजमाया घर्तीले गत चैत्रमा यो घटनाको सामना गरिन् । उनी मात्र होइनन् यसरी भारतीय एस.एस.बी. तथा भारतीय गुण्डाहरूबाट भएको ज्यादती खेप्ने । भारतसंग सीमा जोडिएका दाङका करिब २२ नाकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई भारतीय पक्षले गर्ने ज्यादती सीमावासीका लागि नियती जस्तै बनेको पतौली नाकाकी राममाया वि.क.बताउछिन् ।
भौवानाका क्षेत्रमा महिला र युवतीहरूमाथि चरम मानसिक र शारीरिक शोषण हुदै आएको छ । गत जेठ १४ गते गंगा श्रेष्ठलाई भारतीय गुण्डाले जबरजस्ती बलात्कार गर्न खोजे । गंगाका श्रीमान् चन्द्रबहादुरले प्रतिकार गर्न खोज्दा उनलाई बेपत्ता पारिएको भौवानाकाका गंगाराम बुढाले बताए । २०६२ सालमा राजपुर गाविस भैसाहीकी गायत्री विकलाई भारतीयले अपहरण गरेर लगे । उनलाई ६ महिना जति भारततिरै राखी यौनशोषण गरे । चरम यौनशोषणको पीडा सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरेको घटनाले सीमाका नेपाली चेलीहरूलाई अहिले पनि आतंकित पार्ने गरेको स्थानीय महिलाहरू बताउछन् ।
खबरी नाकाकी मनसरा बुढालाई भारतीय गुण्डाहरूबाट बलात्कारको प्रयास हुदा एच.आई.भी./एड्स लागेको छ भनेर बच्न सफल भइन् । यी त प्रतिनिधि उदारहण मात्र हुन् । सीमाना अनुगमनका लागि दाङबाट गएको सर्वपक्षीय अनुगमन टोलीमा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष अजयदीप शर्मा भन्छन् – ‘सीमा नाकामा बसोवास गर्ने चेलीहरू दिनहुंजसो भारतीयहरूबाट शारीरिक र मानसिक यातनाहरू सहन बाध्य छन् ।’ सीमा नाकाहरूमा राज्यको शुन्य उपस्थिति र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरीदका लागि भारतीय बजारहरूमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण उनीहरू विभिन्न किसिमका अमानवीय व्यवहारहरू सहन बाध्य भएको सीमावासी बताउछन् ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले अपहरण गर्ने डरले डेढ महिनासम्म ससुराका घरमा बिताइन् जुजमायाले । त्यहां बस्नुपर्ने उनको बाध्यता भएपनि उनको मन भने त्यहां थिएन । विगत २५ वर्षदेखि बस्दै आएको घर, स-साना छोराछारी, १४/१५ वटा बाख्रा, छरछिमेकीहरू सबैलाई छाडेर अर्काको घरमा आश्रय लिएर बस्नुपर्दा घरमा लालाबालाले के खाएका होलान् भन्दै बर्वराउने गरेको कुरा जुजमायाले आासु भरिएका आखा पुछ्दै भनिन् । घर सम्पत्ति र सन्तानको चिन्ताले उनी दुब्लाएर सिन्काजस्ती भएकी छन् । तर, भाग्यवश उनको गाउबाट एउटा राम्रो खबर बोकेर उनका जेठा छोरा उनीकहा आए । मोटीघाटी आमा दुब्लाएर सिन्काजस्ती भएको देखेपछि उनले आफ्नो आखामा टिल्पिलाएको आशु थाम्न सकेनन् ।
आमाछोराले एकछिन दुःखसुखका कुराकानी गरे । जुजमायालाई बोर्डर कटाउने धम्की दिने एस.एस.बी. को मानिस सरुवा भएको खबर उनको छोराले सुनायो । यो खबरले जुजमायालाई साह्रै खुसी बनायो । त्यसपछि दुवै आमाछोरा गत जेठ महिनाको अन्ततिर आफ्नो घर फर्किए । तर, उनी घर फर्किदा उनको घरको अवस्था पहिलेको जस्तो थिएन । उनले पालेका कुखुरा त्यहा थिएनन् । उनी त्यहाबाट निस्किएपछि सबै एस.एस.बी.ले लगिसकेको थियो । तर पनि पछिल्ला दिनहरूमा उनीमाथि भएको भारतीयको ज्यादतीलाई सम्झदा त्यही बसिरहने सोचमा छैनन् । तर पनि कुनै विकल्प छैन उनीसंग भन्छिन् जुजमाया ।
राजपुर गाविस पटौली नाकाकी गीता घर्ती ज्वरो आएपछि एक हप्तासम्म ओछ्यानमै थला परिन् । ज्वरो थाम्नका लागि सिटामोलसम्म नभएपछि एक जना साथीसंग नजिकको भारतीय बजार जादै थिइन् । उपचारका लागि भारत जादै गर्दा भारतले आरक्षण गरेको जंगल नजिकै ४/५ जना भारतीयहरूसंग उनीहरूको भेट भयो । उनीसंग गएको पुरुष साथीलाई सल्लाह छ भन्दै अलि एकान्तमा लगे । ऊ फर्केर घर नगए त्यही मार्ने धम्की दिए र एक हप्तासम्म ज्वरो आएर थला परेकी गीतालाई भारतीयले पालैपालो बलात्कार गरेको खबरले नेपाली दिदीबहिनी २/३ जनाको समूहमा पनि भारततिर जान डराउछन् भन्छिन् पटौली नाकाकी सरस्वती रोका । बलात्कारपछि घाइते अवस्थामा जंगलमा छाडेर भारतीय गुण्डाहरू भागे । गाउलेहरूले थाहा पाएपछि गीतालाई घरमा लगेर औषधी उपचार गरे । तर, डर भने रहिरह्यो । त्यसैले गर्दा अहिले गंगाको परिवार पटौलीबाट विस्थापित भएको छ भन्छिन् सरस्वती रोका ।
Posted by CHINTAN on जुलाई 25, 2009 in HOME